कांग्रेसलाई ओलीको प्रश्न- किसुनजी र गणेशमानले हाँसेर पार्टी छाड्नु भएको थियो ? - Narayanionline.com Narayanionline.com कांग्रेसलाई ओलीको प्रश्न- किसुनजी र गणेशमानले हाँसेर पार्टी छाड्नु भएको थियो ? - Narayanionline.com
काठमाडौं, वैशाख २६-
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सोमबार आयोजित पार्टीको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुवै नेता नाच्दै हाँसेर पार्टीबाट ननिस्किएको बताए ।
‘कृष्णप्रसाद भट्टराई ९किसुनजी०ले यत्तिकै कांग्रेस पार्टी छाडेका होइनन् । जीवनको उत्तरार्द्धकालमा पार्टी छाड्नुभयो । नेता गणेशमान सिंहले पनि यत्तिकै पार्टी छाड्नु भएको होइन । २००३ सालमा भद्रगोल जेल तोडका नेताले यत्तिकै हाँस्दै हाँस्दै, नाच्दै नाच्दै पार्टी छाड्नुभयो होला रु’, ओलीले भने ।